Aphasia iyo da'da istaroogga bilawga: waa maxay xiriirka? - Tababarka garashada
Dalka Mareykanka, istaroog wuxuu ku dhacaa 795 qof oo qaangaar ah sanad kasta. Kuwaas, ilaa 100 oo mudaaharaada aphasia. Aphasia, oo ku taal Mareykanka waxay umuuqataa inay saameyneyso qiyaastii hal milyan oo qof, waxay ku leedahay kharash aad u badan shaqsiyan (bulsho xadidan, dhibaatooyinka shaqada) iyo nidaamka caafimaadka (runti, daaweyn aad u dheer ayaa lagama maarmaan ah).
Stroke ayaa hadda ah sababta ugu weyn ee cudurka aphasia. Qiyaastii saddex-meelood laba meelood oo istaroog ah ayaa dhaca da'da 65. Sababtaas awgeed, dib u eegis 40 daraasadood ah oo ay sameeyeen Ellis and Urban (2018)  waxay dejisay inay baarto xiriirka ka dhexeeya da'da iyo:
suurtagalnimada aphasia ee dhacda istaroog kadib
qaababka soo kabashada
Istaroog iyo joogitaanka / suurtagalnimada aphasia: bukaanka qaba aphasia ayaa sida caadiga ah ka weyn bukaanka aan lahayn aphasia. Hal sabab, si loo xaqiijiyo, waxay noqon kartaa sababaha kala duwan ee istaroogga iyadoo kuxiran da'da.
Faalig iyo nooca aphasia: Bukaannada da 'yarta ah waxay u muuqdaan kuwo aan sifiican u aqoon aphasia. Mar labaad, sababaha istaroogga ee bukaanka waayeelka ah (thrombosis) ayaa sharxi kara meesha ugu dambeysa ee istaroogyada badankood marka la barbar dhigo kuwa da'da yar (kuwaas oo halis badan ugu jira istaroogyada embolika). Looma diidi karo in isbeddelada nidaamka maskaxda ee maskaxda inta lagu jiro da'da ay dhaawacyada dambe u badan tahay.
Qaabka soo kabashada iyo natiijooyinka: uma muuqato inuu jiro xiriir muhiim ah oo ku saabsan da'da. Xaqiiqdii xogta ugu yaabka badan: 12 ka mid ah 17-ka daraasadood ma muujin da 'da' weyn oo caqabad ku ah u guurista qaababka fudud ee aphasia.
Waxay u muuqataa, sidaa darteed, in da'da ay tahay qodob tixgelin la siinayo, laakiin in lagu daro macnaha guud ee qiimaynta taas oo ku xisaabtamaysa arrimaha ka hor istaroogga (xaaladda caafimaadka, heerka waxbarashada) marka lagu daro sababaha caadiga ah ee la xiriira istaroogga (goobta dhaawaca, heerka naafonimada afka hore).
 Ellis C, Urban S. Age iyo aphasia: dib u eegis ku saabsan joogitaanka, nooca, soo kabashada iyo natiijooyinka caafimaad. Dayactirka Sare ee Stroke 2016 Diisam; 23 (6): 430-439.
Waxaan rajeynayaa in helitaanka bilaashka ah ee qalabkani ay ka caawin karto kuwa u baahan iyaga inay si dhakhso leh oo buuxda u soo kabtaan.
aphasia, da'da aphasia, da'da istaroogga, stroke, hagaajinta aphasia, soo kabashada aphasia
Aphasia iyo da'da istaroogga bilawga: waa maxay xiriirka?2020-11-082020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/brain-3168269_960_720.png200px200px
Afrax afeed dadka waaweyn: laba mala-awaal marka la barbar dhigoaphasia
Baxnaaninta aphasia: koorsada internetka asynchronousaphasia